Video: Hip Hop's Hardcore Show @ Myaw Sin Gyun, Yangon | Myanmar Celebrity Gossip & News
Video: Hip Hop's Hardcore Show @ Myaw Sin Gyun, Yangon
Here is the video of Hip Hop’s Hardcore Show which was held on 29 May 2011 at Myaw Sin Gyun, Kan Daw Gyi Park, Yangon. Myanmar popular hip hop singers; J-me, Ya Tha, Kyat Pha, Young Lay, Cyclone, Jouk Jack, Thar Soe and Kyaw Htut Swe performed for this concert together with other pop singers; Thazin, Hnin Inzle and Shin Min. Myanmar Dancer Groups also made colorful and lively with their hot dancing performance. မေလ (၂၉) ရက်နေ့က မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Hip Hop’s Hardcore Show ဗီဒီယို
snowJune 1, 2011 at 2:24 AMmyanmar ma tway lae စောက်၇ှက်ကို မ၇ှိကြတော.ဘူး....ဖာသာသာပဲ၇ှိတော.တယ်..ကောင်မတွေ သူတို.နံ.တာနဲ့ ငါတို.ပါ နံမည်ပြတ်တော.မယ်...တော်တော် ဖော်ချင်နေလဲ ၀တ်မနေကြနဲ့...ဒီတိုင်းသာ ကကြတော.ReplyDeleteskyJune 1, 2011 at 3:18 AMမြန်မာမိန်းကလေးတွေတော်တော်ဆိုးလာပြီပဲ တိုးတက်လာတာလားဆုတ်ယုတ်သွားတာလားတော့ ကိုယ့်ဘာသာပဲပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါတော့... လုပ်တာလည်းလုပ်ပေါ့ အဲ့လောက်တော့မလိုဘူးထင်တယ်....ReplyDeletetenJune 1, 2011 at 4:36 AMrap music is great. The end music lol copy music...lolReplyDeleteMc JoeJune 1, 2011 at 5:05 AMko har ko myanamar lo pyaw ya mar tg shat lar p..di lo kg ma lay twe kyoung...adi lout thi pyit pyat twar twe ko taw world wide thi ag uploads ma lote tin bu lo htin par tal..:( very disappointed...ReplyDeletechitJune 1, 2011 at 6:34 AMသွားပြီသွားပြီးလုံးဝမရတော့ဘူး............ReplyDeleteThaung HtikeJune 1, 2011 at 6:37 AMကျော်ထွတ်ဆွေသီချင်းမှာ..သူ့ကို..ဘေးက..ပတ်ကပီး..ပွတ်တိုက်နေတဲ့အထဲမှာ..သူ့ညီမ..နဒီထွတ်ဆွေ..ပါတယ်.ဗျာ..စိတ်ပျက်စရာဗျာ..မောင်နှမချင်း..အမြင်မတော်..အဲ့လို..က..စရာလား..ဦးနှောက်မရှိကြဘူးလား..ဒီကောင်ကကော..မတားဘူးလား..သူ့ညီမကကော..ကစရာ.လား..ပွဲစီစဉ်တဲအကောင်တွေ..uranium(ယူရေနီယမ်)က..ဆရာသမားတွေက..ကော..မသိဘူးလား..စောက်ရူးဗျာ...အဲ့ထပ်..နင့်နင့်သီးသီးပြောချင်တယ်..စောက်ရူးတွေဗျာ..ကဲ..ReplyDeleteMy E-MailJune 1, 2011 at 11:09 AMအရူးလက်မှတ်ရထားတဲ့သူတွေတောင် သူတို.လောက် မရူးကြဘူး ထင်တယ်ReplyDeletemissingJune 1, 2011 at 12:53 PMomg very very......LOL lost my words...ReplyDeletechat kyiJune 2, 2011 at 2:32 AMကျန်တဲ့မိန်းခလေးများတော့အားနာပါတယ်...ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း...တော်တော်လေး.အသံကကောင်းတယ်..ကောင်မတွေကတော့ပြောမနေနဲ့..အလကားရတယ်နဲ့တူတယ်..သေနာမတွေ....အဆင့်တန်းကိုဖော်ပြနေတာပဲ..ဒါလားမြန်မာ....?ReplyDeletejosephJune 2, 2011 at 4:13 AMThe audience must not support and encourage this sort of shit performance. No..No..No.(Don't do it again.)ReplyDeletePhoJune 2, 2011 at 5:04 AMဟားဟားဟား။ မြန်မာပြည်မှာ လူတော်တော်ပိုနေတယ်ထင်တယ်။ ဖာသည်မနဲ့ ဖာဂေါင်းတွေ ဈေးကောင်းလာပြီး၊ စင်ပေါ်ရောက်လာတာတော့ ၀မ်းသာပါတယ် :)ReplyDeletepeternawJune 2, 2011 at 5:19 AMyoyolay wutt pi sing yin bal thuu ma lar kyi mhar m hote bar buu kaungmalay dwea ko bal apyit atin bar naeworld wide hti taw kg dar pop myanmar loe pyaw yin thai ka luu dwea lote bal ti tal layarr lone koakg min say shin bar talReplyDeleteအ့နငည့အငုနJune 2, 2011 at 11:45 AMကောင်မတွေ က တော်တော် -ံချင်နေတာနေ မယ်.. စိုစိစိုစိဖြစ်နေလည်း လူမသိအောင်ရှင်းလိုက်ပေါ့ReplyDeleteshunJune 2, 2011 at 3:25 PMခေတ်မှီတာနဲ့ခေတ်ဆန်တာကိုခွဲခြားသိသင့်တယ်ကလပ်တက်တက်ဝတ်မှခေတ်မှီတာမဟုတ်ပါဘူးခေတ်ဆန်ဆန်ဂျင်းဘောင်းဘီနဲ့ဘလောက်စ်အိကျီကိုခေတ်မှီမှီဝတ်လို့ရပါတယ်ကလပ်တက်တက်အလှကယောက်ကျားတွေကိုမြှူစွယ်ယုံပဲရနိုင်မှာပါဘယ်တော့မှလေးစားတန်ဖိုးထားမှုမရနိုင်ပါဘူးအနောက်တိုင်းအကကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကနိုင်တာချီးကျူးချင်ပေမဲ့sexy dance ဆိုတာမြန်မာတွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဖက်ပါခေတ်မှီမှီနေပါခေတ်မဆန်ချင်ပါနဲ့မြန်မာမိန်းခလေးတွေကိုယ့်အမြိုးဂုဏ်ထိန်းပါအရှက်တရားဆိုတာရှိသင့်တဲ့အရာဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဒီအနောက်တိုင်းကမိန်းခလေးတွေကိုအားမကျပါနဲ့သူတို့ကသူတို့ယဉ်ကျေးမှုအရအရိုးစွဲနေပေမဲ့သူများနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတန်ဖိုးထားတက်ကြပါတယ်ကမ္ဘာမှာမြန်မာကယဉ်ကျေးမှုအထွန်းကားဆုံးပါဆက်လက်ထိန်းပြီးတကမ္ဘာလုံးရဲ့လေးစားမှုကိုရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမြန်မာဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပြန်လှန်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်တန်ဖိုးကိုကိုယ်မြှင့်ကြပါReplyDeleteမျိုးချစ်June 2, 2011 at 3:31 PMမြန်မာအနုပညာသည်များ..........အားလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး။ကျနော်ရဲ့ ပြောဆိုမှု ရိုင်းပြခဲ့ ရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ဦးစွာ တောင်းပန်လိုပါတယ်။လျပ်ပေါ်လော်လီ မိမိတို့ ရဲ့ အတွင်းပစ္စည်း မိမွေးဖမွေးတို့ ကိုဖော်ပြပြီး နာမည်ကြီးအောင်လုပ်နေကြသော၊ အနောက်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုကို အတုခိုးပြီး နာမည်ကြီးချင်နေကြသော သူများကိုသာပြောလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုက ကမ္ဘာမှာနာမည်ကျော်ခဲ့ ပြီးသားပါ။နာမည်လဲကျော်နေဆဲပါဘဲ။ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ အရှက်မဲ့ မှုတွေနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုသိက္ခာ မကျပါစေနဲ့ ။ခင်ဗျားတို့ နာမည်ကြီးချင်တယ် ၊စီးပွားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် မိမိအနုပညာနဲ့ မိမိ တိုးတက်ကြီးပွားအောင်လုပ်ပါ။တိုင်ဖက်အက ဖော်ချွတ်အက စတဲ့အနောက်နိုင်ငံရဲ့အရှက်မရှိ အနုပညာတွေနဲ့ တော့ မလုပ်စားချင်ပါနဲ့ ။ ခင်ဗျားတို့ အမှားစောင့်ပြီး ခင်ဗျားတို့ ကို အစိမ်းလိုက်ဝါးမြိုဖို့ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ နောက်က လိုက်နေတဲ့ သူတွေကိုလဲ ပြန်ကြည့်ဦး။ ခင်ဗျားတို့ အဲ့ လိုဆက်လုပ်နေရင် ခင်ဗျားတို့ အနုပညာက ဖာ အနုပညာဘဲဖြစ်နေတော့လိမ့်မယ်။ ရိုင်းသွားရင်တော့ခွင့်လွှတ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ချွတ် မကရရင် မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲ့ လိုရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဘဲအခြေချပြီး လုပ်စားကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးပါလို့ တော့ လေသံတောင်မဟပါနဲ့ ။ခင်ဗျားတို့ လိုလူတွေကြောင့် မြန်မာလူမျိုး ၊မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ့အနုပညာနဲ့အနုပညာနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေ နာမည်ပျက်ရပါတယ်။ ဒီတော့ စောစီးအမြင်မှန်ရကြပါတော့..မြန်မာလူမျိုးက ယဉ်ကျေးမှု အရှိဆုံးပါ။ဘယ်နိုင်ငံကိုရောက်ရောက် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမှီတဲ့ နိုင်ငံမတွေ့ ဖူးသေးပါဘူး။ ယဉ်ကျေးမှုရှိလို့ ခေတ်နောက်ကျတယ်မပြောချင်ပါနဲ့ ။တကန့်စီပါ။ဖော်က၊ ချွတ်ကမှ ခေတ်မှီတာ မဟုတ်ပါဘူး။ခေတ်မှီစေချင်ရင် တခြားနည်းလမ်းရွေးချယ်ပါ။ ဖော်တာချွတ်တာတွေ မလုပ်ကြပါနဲ့ ။ ခင်ဗျားတို့ ဖော်လေ ချွတ်လေ ကျုပ်တို့ ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်လေပါဘဲ။နောက်ဆက်တွဲ ပြသနာတွေက မုဒိန်းမှု၊ အရွယ်မတိုင်ခင်အိမ်ထောင်ကျမှု၊ အိမ်ထောင်ဘက်မဖြစ်ခင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်တာတွေ စသဖြင့် ပြသနာတွေ အများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ ဒါတွေက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေပါ။ခင်ဗျားတို့ ရှေ့ ကနွားတွေ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားမှ နောက်ကနွားတွေလဲ ဖြောင့်ဖြောင့်လိုက်မှာကို သတိရထားကြပါဦးးးးး.....ReplyDeleteမင်းစစ်သွေးJune 5, 2011 at 12:08 PMအဆင်းလှဆန်း လူ.ပေါက်ပန်း တွေဘဲReplyDeleteLight&DarkJune 6, 2011 at 1:55 PMကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် ............ငါတို့ကြည့်ရတာပေါ့ ညစာရတာပေါ့...........ReplyDeleteMIN MYATJune 6, 2011 at 10:12 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteဇော်ဂျီJune 6, 2011 at 10:34 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeletechitkhinJune 17, 2011 at 5:28 AMတို့ကတော့ သူတို့ လုပ်လေကြိုက်လေပဲ blue movie ဝယ်ကြည်စ၇ာမလိုတော့ဘူးReplyDeletezainganineJune 28, 2011 at 8:54 PMThis is an interesting new current of some of Myanmar young generation. If they are accepted by the public audience or not can be seen by the end of the day.ReplyDeleteccJuly 4, 2011 at 6:54 PMကောင်းပါတယ်။ ဒီထက်ဖော်သင့်တယ်။ ငါတို့ကြည့်ရတာပေါ့။ReplyDeletewin leiJuly 8, 2011 at 3:33 PMPUT YOUR HANDS IN THE AIR THAR SOE , WHEN YOUR SISTERS BECOME FUCKING PROSTITUTE , U BITCH !ReplyDeletecoconutJuly 15, 2011 at 12:53 PMmyanmar yin kyay hmu kabar hma htun kar tel lo bel thu pyaw lel . Min do bar thar myanmar ka kabar hmarayin kyay sone bar lo pyaw nay kya dar .. '' ko ngachin ko chin '' twayReplyDeletephuu layAugust 5, 2011 at 6:49 PMbar lo alo myo shout pyaw nay kya tar lal? skirt ato wat tar khit san ag wat tar nie pyat see nay tal lo pyaw lo ma ya par buu. thu khit nie thu pyit lar tar pal.ReplyDeleteAdd commentLoad more...